साना मानिसको राज्य किन दुनियाँमै अद्भुत मानिन्छ ?
११ फाल्गुण २०७५ शनिबार/ ०८:००
संसारमा यस्ता धेरै आश्चर्य लाग्ने स्थान तथा मानिस रहेका छन् जसको बारेमा तपाई हामीलाई थाहा नभएको पनि हुन सक्छ । चीनको सिचुआन प्रान्तमा एउटा यस्तो गाउँ छ, जुन थाहा पाउँदा पक्कै पनि अचम्ममा पर्न सकिन्छ । सिचुआनमा रहेको उक्त गाउँ ‘दि किङडम अफ द लिटिल पिपल’ अर्थात साना मानिसको राज्य दुनियाँमै अद्वितिय मानिन्छ । तर किन ?
स्थानीय भाषा याङ्सी भनिने त्यो गाउँ होचा पुड्काको गाउँ हो । ‘दि किङडम अफ द लिटिल पिपल’ अर्थात साना मानिसको राज्य युनानको राजधानी कुन्मिङको नामले पनि परिचित छ । याङ्सीका आधा भन्दा बढि मानिस होचो तथा पुड्को छन् । आधाभन्दा बढि जनसंख्या होचो र पुड्काहरुको भएकाले यो गाउँलाई ‘दि किङडम अफ द लिटिल पिपल’ अर्थात साना मानिसको राज्य भनिएको हो ।
स्थानीय अधिकारीका अनुसार यस गाउँका ४० प्रतिशत मानिस होचा पुड्का छन् । उनीहरुको अधिकतम उचाई ३ फिट १० इञ्च र न्यूनतम उचाई २ फिट १ इञ्च रहेको छ ।
गाउँका मानिस किन यति धेरै होचो र पुड्को भए भन्ने विषयले वैज्ञानिक पनि छक्क परेका छन् । यो गाउँ सन् १९५१ मा पहिलोपटक सार्वजनिक भएको थियो । गाउँमा जन्मिने बालबालिकामा पुड्कोपना अत्यासलाग्दो छ । कुल ८० मा ३६ जना होचा र पुड्का हुने गरेका छन् । यस्तो हुनुमा विविध कारण औल्याइएको छ । कतिपयले भने यो विषयलाई अध्यात्म र धार्मिक विश्वाससँग लगेर जोडेका छन् । केहीले भने यस्तो हुनुमा त्यहाँको जमिन र खानपान मुख्य कारण हो भनेका छन् ।
१९९७ मा भएको एक अनुसन्धानले गाउँको माटोमा पारोको मात्रा अत्याधिक रहेकोले त्यसको असर मानिसमा देखिएको दावी गरेको थियो । मानिस होचो पुड्को हुनुको कारण यसैलाई मानिएको छ ।
गाउँ अहिले मनोरञ्जन पार्कको रुपमा विकसित भएको छ । दिनहुँ ठूलो संख्यामा पर्यटक यो गाउँको भ्रमणमा आउने गरेका छन् । गाउँमा पर्यटक आउन र आम्दानी बढ्न थालेपछि याङ्सीमा नजन्मिएका तर होचो पुड्को भएका मानिस यो गाउँमा बस्न थालेका छन् । ती अन्य गाउँबाट आउने मानिसहरु रोजगारी र समानताका लागि याङ्सी आएको बताउँछन् ।
याङ्सी गाउँका बासिन्दा तीनिहरुको आफ्नै प्रकारको जीवनशैलीका कारण पनि पर्यटकको आँखामा पर्न सफल भएका छन् ।